မိန်းမရဲ့ ကားထဲကို သင်ခန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့ ကွန်ကရစ်ဖျော်ရည်တွေ လောင်းထည့်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား - Thutazone
မိန်းမရဲ့ ကားထဲကို သင်ခန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့ ကွန်ကရစ်ဖျော်ရည်တွေ လောင်းထည့်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
By ThutammPosted on August 25, 2017 August 25, 2017
ရုရှား ဆိုရှယ်နက်ဝဘ်တွေမှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ပါ။ ရုရှားနိုင်ငံ စိန့်ပီတာစ်ဘတ် မြို့က အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ သူ့မိန်းမရဲ့ ကား ထဲကိုကွန်ကရစ်ရည်တွေ လောင်းထည့်ခဲ့တာပါ။ အတော်ထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်သူဒီလိုလုပ်ခဲ့ရတာလဲ။
သူကတော့ သူ့မိန်းမကိုသင်ခန်းစာပေးချင်လို့ဟုဆိုပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သူ့မိန်းမဟာ သူ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ နာမည်ကိုတရားဝင်ပြောင်းပစ်ခဲ့လို့ပါ။ သူမပြောင်းပစ်တာကလည်းအကြောင်းရှိပါတယ်။ စူပါမတ်ကတ် တစ်ခုက ပရိုမိုးရှင်းလုပ်တဲ့အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့brandကို တကယ့်နာမည်စစ်အဖြစ် ပြောင်းတဲ့သူများကို တစ်လ ဒေါ်လာ၈၈၀ ပေးအပ်သွားတဲ့အစီအစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့လို့ပါ။ ဒေါ်လာ၈၈၀ ကိုလိုချင်တဲ့မိန်းမဖြစ်သူဟာ ခင်ပွန်းမသိအောင် နာမည်ကိုပြောင်းပစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သိသွားတဲ့နောက် ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာပေါက်ကွဲပြီး ဒီဖြစ်ရပ်ကိုဖန်တီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မိန်းမဟာသူမရဲ့ကားကို အရမ်းချစ်တယ်လို့သိထားလို့ပါတဲ့။
ကားထဲကို ကွန်ကရစ်အရည်တွေ လောင်းထားတာကတော့ အတော့်ကိုဆိုးရွားပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ကို မိန်းမဖြစ်သူက ဘယ်လို တုန့်ပြန့်ခဲ့သလဲ၊ ကားကို ဘယ်လို ပြန်လုပ်သလဲ ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ လက်တလော ပြန့်နေတဲ့ ဒီ ဗွီဒီယိုဖိုင်ထဲက ယောက်ျား လုပ်သူရဲ့ လုပ်ရပ်ကိုထောက်ခံသူများရှိသလို ရူးမိုက်သူလို့ အပြစ်တင်နေသူများလည်းရှိပါတယ်။ မိတ်ဆွေရော ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ?
မိနျးမရဲ့ ကားထဲကို သငျခနျးစာပေးတဲ့အနနေဲ့ ကှနျကရဈဖြျောရညျတှေ လောငျးထညျ့ခဲ့တဲ့ အမြိုးသား (unicode)
ရုရှား ဆိုရှယျနကျဝဘျတှမှော နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ဖွဈရပျပါ။ ရုရှားနိုငျငံ စိနျ့ပီတာဈဘတျ မွို့က အမြိုးသားတဈဦးဟာ သူ့မိနျးမရဲ့ ကား ထဲကိုကှနျကရဈရညျတှေ လောငျးထညျ့ခဲ့တာပါ။ အတျောထူးဆနျးတဲ့မွငျကှငျးဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့သူဒီလိုလုပျခဲ့ရတာလဲ။
သူကတော့ သူ့မိနျးမကိုသငျခနျးစာပေးခငျြလို့ဟုဆိုပါတယျ။ အကွောငျးကတော့ သူ့မိနျးမဟာ သူ့ရဲ့ခှငျ့ပွုခကျြမရှိပဲ နာမညျကိုတရားဝငျပွောငျးပဈခဲ့လို့ပါ။ သူမပွောငျးပဈတာကလညျးအကွောငျးရှိပါတယျ။ စူပါမတျကတျ တဈခုက ပရိုမိုးရှငျးလုပျတဲ့အနနေဲ့ သူတို့ရဲ့brandကို တကယျ့နာမညျစဈအဖွဈ ပွောငျးတဲ့သူမြားကို တဈလ ဒျေါလာ၈၈၀ ပေးအပျသှားတဲ့အစီအစဉျပွုလုပျခဲ့လို့ပါ။ ဒျေါလာ၈၈၀ ကိုလိုခငျြတဲ့မိနျးမဖွဈသူဟာ ခငျပှနျးမသိအောငျ နာမညျကိုပွောငျးပဈခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့လညျး သိသှားတဲ့နောကျ ခငျပှနျးဖွဈသူဟာပေါကျကှဲပွီး ဒီဖွဈရပျကိုဖနျတီးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ သူ့မိနျးမဟာသူမရဲ့ကားကို အရမျးခဈြတယျလို့သိထားလို့ပါတဲ့။
ကားထဲကို ကှနျကရဈအရညျတှေ လောငျးထားတာကတော့ အတျော့ကိုဆိုးရှားပါတယျ။ ဒီဖွဈရပျကို မိနျးမဖွဈသူက ဘယျလို တုနျ့ပွနျ့ခဲ့သလဲ၊ ကားကို ဘယျလို ပွနျလုပျသလဲ ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ လကျတလော ပွနျ့နတေဲ့ ဒီ ဗှီဒီယိုဖိုငျထဲက ယောကျြား လုပျသူရဲ့ လုပျရပျကိုထောကျခံသူမြားရှိသလို ရူးမိုကျသူလို့ အပွဈတငျနသေူမြားလညျးရှိပါတယျ။ မိတျဆှရေော ဘယျလိုထငျပါသလဲ?
Previous post ကမ္ဘာ့သမိုင်းထဲက ဘေဘီလုံမြို့အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Next post အချက်ပြ မီးခိုး